Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hoteellada Hawaii waxay ku kacaan lacag ka badan 1 bilyan oo doollar
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Maaddaama hudheelada Hawaii ay u hanqal taagayaan khasaare aad u weyn, Kiiska Wakiilada Mareykanka iyo Kahele biilka kafaala-qaadaha Si loo siiyo gargaar lala beegsado shaqaalaha hoteelka xanuunsan.
Dakhliga safarka ganacsiga hudheelka Hawaii ayaa la saadaalinayaa inuu hoos u dhici doono boqolkiiba 77 marka la gaadho 2021 marka loo eego heerarka 2019.
Safarrada ganacsiga, oo ay ku jiraan shirkado, koox, dowladda, iyo qeybaha kale ee ganacsiga, ayaa ah isha ugu weyn ee warshadaha hoteelka.
Huteelada ayaa la filayaa inay soo afjaraan 2021 ku dhawaad ​​500,000 oo shaqo marka la barbar dhigo 2019, oo ay ku jiraan in ka badan 12,500 shaqooyin lumay Hawaii.
Hoteellada Hawaii ayaa la saadaalinayaa inay lumiso $ 1.18 bilyan oo dakhli safar ganacsi ah sannadka 2021, hoos 77.4% marka la barbar dhigo heerarka 2019, sida lagu sheegay warbixin dhowaan laga soo saaray Ururka Hoteelka & Hoyga Mareykanka (AHLA).
Huteelada dalka oo dhan ayaa la saadaalinayaa inay dhammaadaan 2021 -ka in ka badan $ 59 bilyan oo dakhli safar ganacsi marka la barbar dhigo 2019 ka dib markii ay lumiyeen ku dhawaad ​​$ 49 bilyan sannadka 2020.
Falanqaynta cusubi waxay ku soo beegmaysaa sahan dhawaan laga sameeyay AHLA, kaas oo lagu ogaaday in inta badan socotada ganacsigu ay baajiyaan, yareeyaan, oo dib u dhigaan safarada iyada oo ay jirto walaacyo COVID-19 ah.
Si loo kordhiyo khadadka shaqaalaha hoteelka oo loo bixiyo kaalmada loo baahan yahay si loo badbaado ilaa safarku ku soo laabto heerarkii hore ee masiibada, Wakiilada Mareykanka Ed Case (HI-01) iyo Kaiali'i Kahele (HI-02) ayaa u saxiixay inay yihiin kafaala-qaade Xeerka Shaqooyinka Hoteelka Badbaadiya, sharci hadda horyaala Congress -ka kaas oo toosin doona 100% maaliyaddiisa si shaqaalaha hoteelka loogu sii hayo mushaharka.
Socdaalka meheradda, oo ay ku jiraan shirkado, koox, dawladda, iyo qaybaha kale ee ganacsiga, ayaa ah isha ugu weyn ee dakhliga hudheelka hudheelka oo aan la filayn inuu gaadho heerar ka hor masiibada illaa 2024. Safar la’aanta ganacsiga iyo dhacdooyinku waxay leeyihiin saamayn weyn oo xagga shaqada ah, waxayna hoosta ka xarriiqaysaa baahida loo qabo gargaarka federaalka ee la beegsanayo, sida Xeerka Shaqooyinka Hoteelka Badbaadi.
Huteelada ayaa la filayaa inay soo afjaraan 2021 ku dhawaad ​​500,000 oo shaqo marka la barbar dhigo 2019, oo ay ku jiraan in ka badan 12,500 shaqooyin lumay Hawaii. 10-kii qof ee kasta oo si toos ah uga shaqeeya hantida hoteelka, hoteeladu waxay taageeraan 26 shaqo oo dheeraad ah oo bulshada dhexdeeda ah, laga bilaabo maqaayadaha iyo tafaariiqda ilaa shirkadaha bixiya hoteelka-taasoo la micno ah in ku dhawaad ​​1.3 milyan oo shaqooyin hoteelku taageersan yahay ay sidoo kale halis ku yihiin waddanka oo dhan haddii uusan Congressku dhaqmin.